Bugharịa ka Holm? | Holmbygden.se
Ịtụle gị ma ọ bụ gị na ezinụlọ gị ka ịga na idyllic obodo? Welcome!
Biko kpọtụrụ anyị na ajụjụ na nchegbu. Ma eleghị anya, ị chọrọ ịgwa a na ezinụlọ ya na ụmụ ya banyere ihe ọ bụ inwe ụmụ na-eto eto n'ebe a. Ma eleghị anya, ị chọrọ achụmnta ego ogige nke ụdị ọ bụla? Anyị na-enyere gị!
Na-eche echiche nke ị / ị na-aga aga ọrụ na Sundsvall na ya gburugburu? E nwere ụgbọ ala maka n'ụzọ obodo. Ị ga-ụgbọala, o nwere ike ịbụ uru arịba ama na njem na-eri na-dechapụ site dị ọnụ ala karịa ego ụlọ na ọ na-ewe naanị 35 min na ruo stan.
Gụọ ihe banyere n'ụzọ na ụgbọ ala nhọrọ ebe a.
Gwa anyị ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe pụrụ iche ulo. Mgbe ụfọdụ, ọ pụrụ ọbụna ịbụ ihe ebe a ozugbo, ndị na-adịghị posted na website n'ihi ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na anyị na-anaghị aza ajụjụ gị ozugbo, anyị enyere gị aka ịchọpụta. Ihe kacha ụzọ bụ dee ma ọ bụ na-akpọ anyị, ahụ anyị na kọntaktị nkọwa ebe a.
Ị chọrọ ịjụ a ọzọ n'ozuzu ajụjụ oghe, ị nwekwara ike dee n'okpuru comment ubi.
Gụọ banyere Stockholm The di na nwunye hụrụ ya akụkụ-oge bi "House of Angels" na Holm.
Ị chọrọ inweta ihe email na / ma ọ bụ SMS mgbe a ọhụrụ ad posted maka ulo?
Wet gị nkọwa n'okpuru, dị ka ị chọrọ ka-kpọtụụrụ.
nọmba ekwentị (tinye otu ma ọ bụ karịa):
Ekwe Omume onye ozi, Biko na-akọwa ihe ị chọrọ:
Back to Ulo Ndepụta